Binic Care Co., Ltd Mombamomba ny orinasa
Shanghai Binic Industrial Co., Ltd dia miorina amin'ny orinasa kely 5 dia ny BINIC CARE, BINIC MAGNET, BINIC ABRASIVE, BSP TOOLS, WISTA, miaraka amina orinasa iraisan'ny orinasa Stats 10 mahery ary birao any ivelany mihoatra ny 5. Ny totalin'ny fananan'ny BINIC Group dia mahatratra 500 tapitrisa RMB, manondrana any Alemana, Fanjakana Mitambatra, Italia, Frantsa, Soisa, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Malezia, Afrika ary firenena 49 hafa. Amin'ny taona 2020, ny totalin'ny fanondranana PPE sy ny reagents dia hahatratra 350 tapitrisa RMB, ary misy mpanjifa mihoatra ny 150 miaraka amin'ny 20 tapitrisa yuan amin'ny fifanakalozana varotra isan-taona, izay mitazona hatrany ny lohalaharana amin'ireo orinasa lehibe indrindra 200 orinasa lehibe any ivelany Sina.
+ tapitrisa RMB
Binic Care Co., Ltd dia iray amin'ireo orinasan'ny Binic Industrial Co., Ltd. Niorina tamin'ny 2015, natokana indrindra ho an'ny diagnostika in vitro voamarina, ao anatin'izany ny repondrenan'ny antionie anti-antion Corona pnemonia, ny reogents momba ny fitondrana vohoka HCG sns. fitaovana azo ampiasaina elektronika, ao anatin'izany ny tosidra, ny oxygen oxygen, ny fitaovana fanaraha-maso siramamy ao anaty, fitaovana fanaraha-maso ny tahan'ny fo sns; ary koa ny kojakoja ara-pitsaboana azo ampiasaina, fitaovana fiarovan-tena manokana ary fitaovana fanararaotana kely dia kely ho an'ny hatsaran-tarehy ara-pahasalamana.
Hatramin'ny nipoahan'ny valan'aretina covid-19 dia nandefa sarontava, fonon-tànana mihoatra ny 350 tapitrisa RMB izahay, kitapo fitsapana haingana an'ny SARS- CoV-2 tany Eropa, Amerika Avaratra ary manerantany. Nandritra ny fotoan-tsarotra indrindra dia faly izahay nanampy ny olona erak'izao tontolo izao. Manantena izahay fa hanangana Binic Care ho orinasa lehibe manerantany manerantany izay manome ny vokatra ara-pahasalamana, fitsaboana ary fanarenana ho an'ny olona manerantany. Manolo-tena izahay amin'ny famolavolana Binic Care ho iray amin'ireo mpamatsy tolotra lehibe indrindra amin'ny fitaovana fitsaboana, diagnostika, vokatra fitsaboana. , ary sehatra vaovao modely ara-pitsaboana, manangana sehatra fitsaboana an-tserasera sy an-tserasera feno mba hanomezana tolotra tsara ho an'ny olona manerantany.
EN ISO 13485: 2016 navoakan'ny TUV
Mari-pahaizana CE FFP2 navoakan'ny APAVE (NB 0082)
Mari-pahaizana CE FFP2 navoakan'ny CERTIFICATION UNIVERSAL (NB 2163)
• ekipa injeniera matihanina amin'ny R&D matanjaka
• Fanamarinana azo antoka ho an'ny tsena manerantany
• Fitantanana sy mpiasa efa za-draharaha
• Rafitra fanaraha-maso kalitao feno
• rojom-bidy famatsiana akora matotra
• Toerana tonga lafatra, akaikin'ny seranan-tsambon'i Shanghai & Ningbo
• Serivisy aorian'ny fivarotana 24 ora
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny,